नेपालमा टिकटक बन्द हुने सूचना सहित हेर्नुहोस् ? कहिले त , | Rochak
नेपालमा टिकटक बन्द हुने सूचना सहित हेर्नुहोस् ? कहिले त ,
June 22, 2021 NepstokLeaveaComment on नेपालमा टिकटक बन्द हुने सूचना सहित हेर्नुहोस् ? कहिले त ,
पछिल्लाे समय सामाजिक संजालमा टिकटकले प्रख्यात रुपमा चर्चा बटुलेकाे छ । त्य्स्तै टिकटकबाट कतिले चर्चा पाए भने कतिले ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा पनि टिकटकले तहल्का नै पिटेकाे छ । नेपालमा टिकटक भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकका प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरूपयोग पनि बाक्लिएको पाइएको छ।रमाइलो गर्ने र भाइरल हुने बहानामा केही व्यक्तिले जथाभाबी भिडियो बनाएर ‘अपलोड’ गर्दा व्यक्तिगत र संगठनात्मक गोपनीयता उदांगो भइरहेको प्रहरीको ठहर छ।नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार कार्यालयभित्रै भिडियो बनाउने,
बैंकका कर्मचारीले फाइल, पैसा र डकुमेन्टजस्ता सामग्री भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्ने, प्रहरी र नेपाली सेनाको बर्दीको प्रयोग गर्ने, ड्युटीमै भिडियो बनाउने, चित्त नबुझेका व्यक्तिको अश्लील भिडियो अपलोड गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। ब्युरोका एसपी पशुपति रायका अनुसार साइबर अपराधमा आगो थप्ने काम टिकटकले पनि गरिरहेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानललाई व्यस्थित गर्न सकिने आवश्यक कानुन निर्माण नगरेका कारण प्रहरीको टाउको दुखेको छ। एसपी रायले टिकटकबाटै गोपनीयता भंगमात्र होइन, ठगीसमेत हुन थालेपछि प्रहरीले प्रयोगकर्तामाथि निगरानी बढाएको बताए।
यी युवती टिकटकमा रातारात भाइरल – को हुन यिनी ?(भिडियो) 37 Mins अघि 13